Muuqaal Aduunka ka yaabiyay Markii Sac uu iska difaacay Libaax-Video | shumis.net
Home » Layaab » Muuqaal Aduunka ka yaabiyay Markii Sac uu iska difaacay Libaax-Video
Muuqaal Aduunka ka yaabiyay Markii Sac uu iska difaacay Libaax-Video
Waa markii ugu horeeysay oo taariikhda la arko Lo´ ama dibi si toos ah iskaga dhiciya Libaax ku soo qaaday weerar kulul . Labada dhinac waxaa dhex maray dagaal iyo kaarto cajiib ah balse ugu dambeeyntii waxaa la qaarajiyay Libaaxii weerarka soo qaaday .
Lo´ duureedka wax dishay oo loo yaqaan Buffalo ayaa Libaaxa iskaga dhicisay Geesaheeda taas oo dhuunta iyo wajiga ka dhaawacday Libaaxii soo weeraray . Arinta ugu yaabka badan ayaa ah Libaaxa oo kaarto cajiib ah is ticmaalay maadaama marka Lo´da herdin rabtaba uu seexanayay dhulka si uu uga badbaado herdida iyo geeska Lo´da .
Intii uu socday dagaalka kulul ee dhex maray labada dhinac ayaa waxaa si toos ah gurmad ahaan u yimid Lo´ fara badan kuwaas oo Libaaxa dhinacyada ka soo galay balse Libaaxii oo dhiig baxay ayaa goobtii ku geeriyooday .
Title: Muuqaal Aduunka ka yaabiyay Markii Sac uu iska difaacay Libaax-Video